Arsenal ayaa si fiican ku bilaabatay sanadka cusub ee 2021 kadib markii ay 4-0 ku quusisay kooxda martida loo ahaa ee West Brom markii Mikel Arteta uu kor u qaaday xiddigihiisa kulamada taxana ah ee Premier League.
Laba gool oo uu kala dhaliyay Alexandre Lacazette iyo goolal ay kala dhaliyeen Bukayo Saka iyo Kieran Tierney ayaa Arsenal cashar u siiyay West Brom oo kaalinta 11-aad kaga dhamaysatay kala saraynta horyaalka.
Gunners ayaa ciyaarta inteeda badan gacanta ku haysay min daqiiqadii ugu horaysay ilaa daqiiqadii 90-aad, si raaxo leh ayay ciyaarta ugu badiyeen waxayna soo bandhigeen shaashad fiican oo ka mid ah bilowgii liitay ee xilli ciyaareedka.
Waxay ku qaadatay iyaga 23 daqiiqo inay hogaanka qabtaan, maaddaama Kieran Tierney uu dhanka bidix kasoo jabay isla markaana uu dhigay toogashada 1 – 0 waxyar oo ka baxsan gaadhitaanka goolhayaha fidsan.
Shan daqiiqo ka dib, Arsenal ayaa hogaanka sii dheereysatay markii Emile Smith-Rowe uu lugta midig ka toogtay diilinta ganaaxa isagoo helay Bukayo Saka.
Labada gool ayaa yimid xilligii nasashada intii lagu jiray qeybtii hore ee ciyaarta markii Arsenal ay ku gacan sarreysay. Isku dheelitirka ciyaarta ayaan wali isbadalin intii lagu jiray qeybtii labaad iyadoo Arsenal ay wali gacanta ku heyso.
Weeraryahanka reer France ayaa dhaliyay labo gool oo deg deg ah hal saac gudaheed, kaliya afar daqiiqo markii ay socotay qeybtii labaad, daqiiqadii 60aadna wuxuu qalad ka galay daafaca West Brom Ajayi kaasoo ka dhigay goolkiisii ​​afaraad oo isku xigta. riix Lacazette.
Afar daqiiqo ka dib, daafaca bidix Kieran Tierney ayaa kubada ka soo qaaday garabka bidix, iyadoo Lacazette uu ku jiro boos fiican oo uu shabaqa ku taabtay.
Alexandre Lacazette (sawirka midig) wuxuu dhaliyey shan gool oo bannaanka ah xilli ciyaareedkii 2020-21 Premier League, waana in ka badan intii uu abid sameeyey.
Ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 4-0 oo ay ku xasuuqeen West Brom Gunners markii Arsenal ay sameysay soo laabasho weyn ka dib bilow xun oo xilli ciyaareedka ah.